Ka dib waxaan uga digay supelusate soo socota. Hada cinwaanka ah ee Aftonbladet waa xaqiijinta taas, 18 sano kadib - laakiin waa ka fiicnaataa sidii hore.
Haddii aad ka eegto aragtida aadanaha oo keliya, waad ka qayb geli kartaa oo aad u bogaadin kartaa waxa dhacaya, laakiin kuwa rumaysta ereyada wax sii sheegidda ee Kitaabka Quduuska ah ayaa wax kale u arkaa. Aad ayey muhiim u tahay in lagu rumaysto erayga nebiyada Eebbe, in aan la iska indhatirin oo aan la bilaabin ka hadalka ku saabsan male-awaalka iyo tarjumaadaha isla marka erayga nebiyadu soo bandhigo. Tan waxaa la samayn karaa ilaa maalinta daahdu ka dhacayso oo indhaha ay furan yihiin.
Xukunka xoogga weyn ee dhulka Boqortooyada Roomaanka qadiimiga ah
Tani waa natiijada ka soo baxday go’aankii lagu gaadhay magaalada Brussels. Waxay ahayd tallaabo taariikhi ah mana aha ugu yaraan tallaabo sheegid ah oo ku wajahan fulinta waxa waxsii sheegyada ay ka digeen iman doonaan. (Sawirka shaashadda ka socota Aftonbladet iyo Världen Idag)
In kasta oo dadka reer Yurub ay fasax ku yihiin dalal badan, ayaa go'aan ka gaadhay madaxooda kuwa badan oo aan fahmin baaxadda. Xitaa Masiixiyiinta aan dan ka laheyn ereyga nebiyadu wax fikrad ah kama qabaan.
Wixii lagu dhawaaqay illaa faallooyinka ugu horreeya ee ku saabsan kitaabka Muujintii oo la qoray waxaa looga digay boqortooyo awood weyn ku leh dhulkii Boqortooyadii Roomaanka qadiimiga ahayd, waxaan hadda haysannaa - Midowga Yurub. Waxay ku dhici laheyd waqtiga ba'an ee aan hada joogno.
In kasta oo dad badani ka hadlaan EU sidii mashruuc nabadeed, tani waa dhacdaa. Wadahadalka iskaashiga nabada ee ka dhexeeya wadamada Yurub, waad iskugu keeni kartaa isku duubni - qof walbaa wuxuu rabaa nabad. Laakiin qofna wax fikrad ah kama haysto waxa ugu dambeysa ee soosaarka dhismahan xoogga weyn uu macnaheedu noqon doono.
Haddii aad ka eegto aragtida aadanaha oo keliya, waad ka qayb geli kartaa oo aad u bogaadin kartaa waxa dhacaya, laakiin kuwa rumaysta ereyada wax sii sheegidda ee Kitaabka Quduuska ah ayaa wax kale u arkaa.
Aad ayey muhiim u tahay in lagu rumaysto erayga nebiyada Eebbe, in aan la iska indhatirin oo aan la bilaabin ka hadalka ku saabsan male-awaalka iyo tarjumaadaha isla marka erayga nebiyadu soo bandhigo.
Tan waxaa la samayn karaa ilaa maalinta daahdu ka dhacayso oo indhaha ay furan yihiin. Ujeeddadu ma ahan inaan markaa markaa garwaaqsanno wixii dhacay - waa inaan lahaannaa indho sheegid oo aan aragnaa waxa hadda dhacaya.
Nabiyada oo yaraanta
Yaraanta weyn ee nebiyada dalkeenna ka jirta, "dhagxaanku wuu hadli karaa." Hadda Göran Greider wuxuu ku sameeyay Aftonbladet 22 Luulyo. Wuxuu qoraa maqaal leh cinwaanka: "Hadda superstate waa la dhisayaa". Wuxuu ka hadlayaa ilaa iyo inta ay la egtahay: “Marka aniga maahan aniga kuwa gariira. Taasi waa dhulka.
Isagoo sii wata ayuu qoray: "Inbadan oo xaqiijinaya dhalashada dalkan cusub ee Midowga Yurub waxay ku faraxsan yihiin in, tusaale ahaan, wadaninimada iswiidhishka" la garaacay "- laakiin ha u arkin inay iyagu naftooda u dhaqmayaan sidii wadaniyiin dhiig dumin ah, oo si lama filaan ah ugu dabaaldega dhalashada dowlad weyn, Midowga Yurub. Gobollada. "
Qoraa qodobo badan
Flammor waxaan ku qornay qoraalo badan oo ku saabsan horumarka Yurub sanadihii ka dambeeyay, ku dhawaad ​​50 ka mid ah kuwan ayaa ku yaal boggayaga haddii aad riixdo furaha EU. Hoos wuxuu ka mid yahay qodobbada aan qorey 2002.
Vecka 19, onsdag 12 maj 2021 kl. 17:19